Danemarka · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Danemarka
Lalàna16 Febroary 2016
Fahalalahàna miteny14 Oktobra 2015
Tantara mikasika ny Danemarka
Lalàna 19 Avrily 2018
Tsy nanaiky ny ezaka navaozin'ireo mpamoaka gazety Danoà mba hanakana ireo tranonkala toy ny Google News tsy hampiseho rohy any amin'ny lahatsoratry ny olon-tsotra afa-tsy amin'ny ny pejy fandraisan'ny gazety ihany ireo mpanao gazety bilaogera any Danemark.
Fiteny 18 Oktobra 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 13 Oktobra 2015
Alemaina 09 Novambra 2013
Nanaraka ny ohatra nataon'ny vehivavin'ny Firenena Mikambana, Nanatontosa ny traikefany manokana ny Global Voices miaraka amin'ny Google "Autocomplete". Namoaka ireo fihetsika malaza eo amin'ny andraikitry ny vehivavy, ny ara-nofo, ny toe-batana ivelany sy ny fifandraisana amin'ny lehilahy ny fikarohana.
Fanoherana 06 Oktobra 2012
“Tena vonona haka vola eto marina ve ianao?” Toy izany ny fanontaniana tazana manerana ny “milina fakàna vola” isaky ny banky lehibe ao Danemarka nandritra ny volana Septambra. Fanentanana mandritra ny andro fankalazana ny ‘Androm-Piovàna Banky izay nanomboka tamin'ny 1 Oktobra izany. Olom-pirenena tsotra no tompon-kevitra tamin'ny fanentanana amin'ny “Androm-Piovàna Banky’...
Eoropa Afovoany & Atsinanana 05 Marsa 2012
Amerika Avaratra 03 Febroary 2012